Ukuchaza Ukuphikiswa Nokusekela ngePivot Points Calculator | Ibhulogi ye-FXCC
Aug 8 • Forex Calculator • Ukubuka kwe-32770 • 5 Amazwana ekuchazeni ukuphikiswa nokusekela ngePivot Points Calculator kaThomas DeMark
Amaphuzu we-Pivot ayinqabile ukuphikiswa nokusekelwa futhi kunezinombolo ezimbalwa zokubala okuyi-pivot ezakhiwe ukuze zinqume lezi ziphuzu ze-pivot. Kodwa-ke, cishe wonke ama-calculator amaphuzu we-pivot ayibonakaliso yokugqekeza futhi akhubazekile ngokuhluleka kwabo ukubikezela izitayela ezizayo.
Ngokujwayelekile ukumelana nemigqa yokusekela kudonswa ngokuxhuma iziqongo namanzi futhi kunweba imigqa phambili ekubikezeleni ukunyakaza kwentengo ezayo. Noma kunjalo, le ndlela yendabuko ayiyona inhloso futhi iningi kakhulu. Uma ubuza abantu ababili abahlukene ukudweba ukumelana noma imigqa yokusekela, uzoba nemigqa emibili yokuthambekela. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu ngamunye unendlela ehlukile ekubhekeni izinto. Indlela kaTom Demark yindlela elula yokudweba ngokunembile imigqa yemikhawulo, okusho ukusekela kanye nemigqa yokumelana.
Ngendlela kaTom Demark, ukudweba kwemigqa yezintandokazi kuba nomgomo obaluleke kakhulu futhi kunquma ngokunembile ukuthi yimaphi amaphuzu okuxhuma ukuba avele ngemigqa yokusekela nokumelana. Ngokungafani namanye ama-calculator pointpoint angakwazi ukudweba imigqa enezingqimba ezimele ukumelana namaphoyinti okusekela, indlela kaDeMark inquma ukuthi yimaphi amaphoyinti okuxhuma ukumela ukumelana nokusekelwa kanye nokubikezela isiqondiso samanani esizayo.
Indlela kaTom Demark ibeka isisindo esiningi kwimininingwane yakamuva kunamanani ashukumisayo eseshini sangaphambili sokuhweba. Imigqa yokuthambekela ibalwa futhi isuka kusuka ngakwesokudla kuya kwesobunxele esikhundleni sezendabuko kwesokunxele kuya kwesokudla indlela esetshenziswe omunye umbala wokubala we-pivot. Futhi esikhundleni sokumelana nokumaka njenge-R1 no-S1, u-De Mark wabathengisa njenge-TD amaphoyinti abiza umugqa owaxhuma njengemigqa ye-TD.
U-DeMark usebenzisa lokho akubiza njengendlela yeqiniso okuyisisekelo esiyinto eyisisekelo lapho amaphuzu e-TD anqunywa khona ngokunembile. I-standard DeMark yeqiniso yile ndlela elandelayo:
Ukufuna intengo ye-pivot iphuzu ngokuyinhloko ibha yamanani yentengo yamanje kufanele ibe ngaphansi kwenani lokuvala leminye imigoqo emibili phambi kwayo.
I-pivot iphuzu lentengo yokuthengiswa ngokuyinhloko ephezulu yamanani omhlangano wamanje wamanje kufanele ibe ngaphezulu kunezindleko zokuvala zamabhadu amabili ngaphambi kwalo.
Uma ubala izinga le-TD lomshini osengaphambili ngenjongo yokufuna intengo ye-intengo, intengo yokuvala ibha elilandelayo kumele ibe ngaphezulu kunelayini le-TD.
Uma ubala izinga lokuwa kwe-TD-line yephuzu lokuthenga intengo ye-Supply, intengo yokuvala ibha elilandelayo kufanele ibe ngaphansi kwe-TD line.
Imigomo ebekwe ngenhla ingase idideke ekuqaleni kodwa ihloswe ukuhlunga imigqa edwetshiwe ngokusekelwe kwefomula yeDeMark ekubalweni ukuphikiswa nokusekela noma amaphuzu we-pivot:
Ifomula yeDeMark kanje:
I-DeMark isebenzisa inombolo yomlingo X ukubala izinga eliphezulu lokumelana nokusekelwa okuphansi.
Ubala i-X kanje:
Uma Vala <Vula bese u-X = (Okuphezulu + (Okuphansi * 2) + Vala)
Uma Vala> Vula bese X = ((High * 2) + Ephansi + Vala)
Uma Vala = Vula ke X = (High + Low + (Vala * 2))
Usebenzisa i-X njenge-point reference, ubala ukuphikiswa nokusekelwa kanje:
Izinga eliphezulu lokuphikisa R1 = X / 2 - Ephansi
I-Pivot Point = X / 4
Izinga lokusekela elingezansi S1 = X / 2 - High
« Kungani usebenzisa i-Pip Calculator? Indlela yokusebenzisa i-Pivot Point Calculators ku-Trade Forex »
Ukuthola izinto ezibalulekile zempumelelo ezidingekayo lapho uhweba i-Forex